A drone ga-ahụ maka ịkwọ ụgbọ ala gị kwụ ọtọ ma ọ bụrụ na ihe mmetụta ya adaba | Akụkọ akụrụngwa
A drone ga-ahụ maka ịkwọ ụgbọ ala gị kwụ ọtọ ma ọ bụrụ na ihe mmetụta ya adaa
Dị ka ị maara nke ọma, otu isi ọwụwa ụlọ ọrụ niile na-arụ ọrụ ugbu a na mmepe nke ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya na-ata ahụhụ abụghị onye ọzọ jikwaa iji kwadebe ya na ihe mmetụta zuru ezu ya mere inwere ike nweta oru a. Ozugbo ejiri ihe mmetụta ahụ kwadebe ụgbọ ala ahụ, nsogbu ahụ nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya maka ndị injinia ahụ, a ghaghị ịmepụta ngwanrọ dị mgbagwoju anya nke na-ejikwa nnukwu data dị na ezigbo oge ebe a ga-echekwa ihe mmetụta a n'ihe niile enwere ike n'agbanyeghị agbanyeghị ihe ụgbọ ala imewe.
Isetịpụ anyị nlele na otu n'ime nsogbu ndị a, dị ka eziokwu ahụ, na oge ụfọdụ otu n'ime ihe mmetụta ndị a na-amalite ịda, ihe enwere ike idozi ma ọ bụrụ na sistemụ ahụ ekpebie na oge ọ nwere ike ịga n'ihu na ozi sitere na ihe mmetụta ndị ọzọ ma ọ bụ na ọ nwere ike ịdaba n'ụzọ nkịtị n'ihi enweghị ike ịme mkpebi n'oge ụfọdụ n'ihi enweghị data . Dịka ị pụrụ ịhụ, nsogbu nke ihe mmetụta nwere ike ibu ibu karịa ka ị chere n’echiche na, iji gbalịa idozi ya, taa, achọrọ m ka anyị kwuo maka atụmatụ batara anyị Ford.
1 Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị enweghị ike ịkwọ ụgbọala na-enweghị onwe ya, ọ ga-akwụsị ka ị na-eche ụgbọ mmiri iji tinye ihe mmetụta ya na ọrụ ụgbọ ala ahụ
2 Ford na-egosi anyị ikikere ebe anyị ga-achọpụta otu ha chọrọ ka ụgbọ mmiri si esoro elu ụgbọ ala gị
Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị enweghị ike ịkwọ ụgbọala na-enweghị onwe ya, ọ ga-akwụsị ka ị na-eche ụgbọ mmiri iji tinye ihe mmetụta ya na ọrụ ụgbọ ala ahụ
Ndị injinia Ford, na-atụ anya na ihe mmetụta nke ụgbọ gị ka a na-abaghị uru ma ọ bụ n'ihi ụdị nsogbu ngwaike ma ọ bụ n'ihi na, n'otu oge, ha abaghịzi uru n'ihi unyi, ndị ohi ma ọ bụ ụdị nsogbu, nwere echiche ahụ na vehiclegbọ ahụ na-akwụsị ebe dị nchebe ma na-eguzo n’akụkụ, ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịga n'ihu na njem ahụ, na a drone rutere n'ógbè ahụ, guzoro n’elu ya, ma binye ya ihe mmetụta ya n’ụgbọ ahụ ka o wee nwee ike ịga n’ihu.
Ihe a niile nwere ike ịghọ ihe gbagwojuru anya ma ọ bụrụ na, ọ dị ka, ọ bụrụ na ala kwurula mechaa merie ahia enweghị steeringi wiil nke anyị onwe anyị nwere ike ijikwa ụgbọ ala ahụ. N'agbanyeghị nke a, na maka nke a, a ka nwere oge karịa ka anyị ga-achọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ụdị teknụzụ dị elu dị ka Tesla, n'oge a ka ha mere usoro nyocha iji gosipụta ikike kwụụrụ onwe ha nke ha N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ nweghị nke ugbu a amụma na-enye ohere ka ndị ọrụ na-arara onwe ha nye ihe ọzọ karịa ile anya n'okporo ụzọ na-elekọta ihe niile ụgbọala na-eme.
Ford na-egosi anyị ikikere ebe anyị ga-achọpụta otu ha chọrọ ka ụgbọ mmiri si esoro elu ụgbọ ala gị
N'isochi patent ọhụrụ nke Ford debara aha ya, anyị na-ahụ azịza, ma ọ dịkarịa ala, ebe ọ bụrụ na ihe mmetụta nke otu n'ime ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya ada, ọ ga-eziga a ihe mgbaàmà njikere na ikpo okwu nke ejiri obere ụgbọ mmiri drones. Ozugbo otu n'ime drones a ga-efega kpọmkwem ebe ụgbọ ahụ dị na, mgbe ọ kwụsịrị ya, ga-etinye ihe mmetụta niile ya n'ọrụ ka ha wee dochie anya nke ụgbọ ala ahụ.
O doro anya na anyị na-eche ihu karịa njem na-adọrọ mmasị, ma ọ dịkarịa ala ọ dị m n'onwe m, tupu otu n'ime nsogbu ndị anyị ga-eche ihu n'ọdịnihu, naanị mgbe iji ụdị ụgbọ ala a emesịa. N'aka nke ọzọ, ekwesịrị m ikweta na m masịrị ụdị azịza a ebe a na-eji ụdị teknụzụ ndị ọzọ eme ihe, dịka iji drones, nke, dị ka ụlọ ọrụ dị iche iche gosipụtara, na-enwewanye ike ma nwee ike ịrụ ọrụ karịa. N'agbanyeghị nke ahụ, eziokwu bụ na anyị ga-edebe ụkwụ anyị n'ala ebe ọ bụ na mmejuputa otutu ihe eji eme ihe a nwere ike buru nsogbu di uku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » A drone ga-ahụ maka ịkwọ ụgbọ ala gị kwụ ọtọ ma ọ bụrụ na ihe mmetụta ya adaa
ICON, ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 3D na Akụkọ Ọhụrụ, ga-ewu ụlọ maka El Salvador
SoundPeats Q12, anyị na-enyocha ekweisi ndị a nke uru dị mma maka ego